एनआरएनएमा अहिले देखिएको लफडा के हो ?
स्पेन, ४ डिसेम्बर- बिशेष महाधिबेसन गर्ने नगर्ने बिषयमा बिबाद बढेपछि एनआरएन समुदाय अहिले तरङित भएको छ । एनआरएनको
संस्थापन पक्षले बिशेष महाधिबेसनको लागि प्रतिनिधिको नाम दर्ता गरेपछि अर्को पक्षले जनवरी २३ र २४ मा आयोजना गर्ने भनेको बिशेष महाधिबेशनको बिरुद्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेको छ । उजुरीमा आसन्न विशेष महाधिबेशन एनआरएनए सदस्यहरुको भावना र संस्थाको मर्म बिपरित भएको भन्दै स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ। उता सस्थापन पक्षले भने आफुहरुले पररास्ट्को अनुमती मा नै बिशेष महाधिबेसन गर्न लागेको बताएका छन ।
महाधिबेशन स्थगन गर्नका लागि आईसिसि सदस्यहरु चिन्तामणी सापकोटा, शंकर खड्का, दिपक शर्मा, विजय मोक्तान र अफ्रीका क्षेत्रका क्षेत्रिय संयोजक रोशन थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निबेदन दिएका हुन ।
हामीले नेतृत्वलाई सबैको सल्लाहमा अगाडी बढ्न पटक पटक अनुरोध गर्यौं तर उहाँहरु आफ्ना कुरा मात्र मनोमानी ढंगले अगाडी बढ्नु भयो। एनआरएनएको बैठकमा निर्णय नै भएको छैन। कसरी महाधिबेशन हुन्छ ? आइसीसी सदस्य शंकर खड्काले भने ।
वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्मामा संस्था कब्जा गरेर अगाडी बढ्ने मनसाय देखिएको आइसीसी सदस्य शंकर खड्काले आरोप लगाएका छन ।
महाधिबेशनका मुद्धाहरु र यसो आवश्यकताका बारेमा जनवरी २ तारिखका दिन अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्माले एक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा सार्बजनिक गर्दै आफुहरु कार्य समितिको निर्णय र सदस्यको भावना अनुरुप नै अगाडी बढेको दाबी गरेका थिए । उनिहरुले बिशेष अधिवेशनको तयारी तीब्र पारीएको बताएका
जनवरी अन्तिसाता हुने विषेश अधिवेशनमा भाग लिन प्रतिनिधीहरुले धमाधम नाम दर्ता गरेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार आइतवार साँझसम्म विश्वभरका ४८ देशका करिब ११ सय जना प्रतिनिधीले आआफ्नो नाम दर्ता गरेका छन् ।
अधिवेशनमा आर्थिक, वार्षिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विधान समितिका सहसंयोजक रामशरण सिमखडाका अनुसार समितिले विधानको मस्यौदालाई अन्तिरुप दिन गैरआवासीय नेपालीहरुसंगको छलफल जारी राखेको छ ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघका दुई दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय समितिले विषेश महाधिवेशनमा आफुहरुले विषेश महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधी छान्न पाउनु पर्ने भन्दै संघको नेतृत्व समक्ष निवेदन दर्ता गरेका छन् , संघले नयाँ प्रतिनिधीहरुको नाम दर्ता बुधवार देखी शुरु गर्ने बताएको छ ।
संघका अनुसार आइतवार साँझसम्म विश्वभरका ४८ देशका करिब ११ सय जना प्रतिनिधीले आआफ्नो नाम दर्ता गरेका छन् । सन २०१९ को अक्टोवरमा सम्पन्न ९ औं महाधिवेशनमा भाग लिएका प्रतिनिधीहरुलाई नाम दर्ता गर्न भनिएको थियो ।
सो महाधिबेसनमा आर्थिक, वार्षिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विधान समितिका सहसंयोजक रामशरण सिमखडाका अनुसार समितिले विधानको मस्यौदालाई अन्तिरुप दिन गैरआवासीय नेपालीहरुसंगको छलफल जारी राखेको छ । बिधानमा निशुल्क सदस्यता, पदाधिकारीको चुनावको नयाँ बेबस्था लगायत को बिषयमा बिबाद देखिएको छ ।
गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिना भित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको बिरोधि पक्षले बताएका छन् । संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नु भन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ उनिहरुको दाबी छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् ।
झण्डै २६०० सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
तर जनवरी २३ र २४ तारिख भर्चुअल माध्यबाट हुने भनिएको विषेश महाधिबेसन कुनै हालतमा नरोकिने सस्थापन पक्षले बताएका छन ।
उनिहरुले कुनै समूहको कुन्ठा पोख्न वा गत निर्वाचनको हारको पिढालाई सहन नसकेर संस्थामा भाडभैलो गर्ने उदेश्यले प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगायका छन् ।
स्पेनमा कोरोनाको तेश्रो लहर, पहिलोमा भन्दा दोश्रोमा धेरै नेपाली प्रभावित
भ्यालेन्सिया कम्युनिटीमा थप कडाई बिहिबारदेखि बेलुका पाँच बजे रेष्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने